Mbola Mandòm-Baravarana ny Governemanta Hatrany Ny Menavazan’ny Adim-Pahaleovantenan’i Kroasia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jona 2015 16:03 GMT
Polisy Kroaty ambadiky ny fefy, ny bekotro mpanao fihetsiketsehana amin'ny ilany. Saripika : Katarina Krizamanić, nahazoana alalana
Ny herinandron'ny 29 Mey 2015, taorian'ny otri-pihetsiketseham-panoherana izay efa naharitra 225 mihoatra, nisy vondrona menavazana kely nahatonga ny Adim-Pahaleovantena Kroaty nanakana ny iray amin'ny lalana lehibe ao an-drenivohitra Kroaty ao Zagreb. Nampiasa baomba mandatsa-dranomaso ireo menavazana mpanao fihetsiketsehana hanafihana lapam-panjakana iray ao afovoan-tanànan-i Zagreb ho fanehoany ny tsy fahafaliany sy hitodihan'ny fifantohan'ny fampitam-baovao sy ireo mpanapa-kevitra kroaty.
Ny fihaonana tamin'ny 2001 dia nokarakaraina tamin'ny alalan'ny hetsika fanohanana ny Jeneraly Mika Norac, izay voampanga ho namono Serba sivily tao Ogulin, Kroasia, nandritra ny ady. Folo taona taty aoriana dia nitaky ny “hampitsaharana ny fanenjehana eny amin'ny fitsarana ireo menavazana kroaty” ny menavazana, ary ny iray amin'izy ireo, Tihomir Purda, dia ampangain'ny manampahefana serba ho nanao heloka bevava an'ady tao Vukovar tamin'ny 1991.
Mitaraina ihany koa ny menavazana fa maro amin'izy ireo no tsy nahazo tamberimbola tamin'ny fanompoana nataony nandritra ny ady ary maro amin'izy ireo no navela hikarataka hiveloman'izy ireo, rehefa tsy neken'ny governemanta omena fisotroan-dronono.
Na ny Parlemanta Nasionaly Kroaty na ireo lapam-panjakana (governemanta) dia samy miorina eo amin'ny kianjan'i St. Marko. Taorian'ny fanafihana tamin'ny alalan'ny baomba mandatsa-dranomaso tamin'ny 29 Mey, dia nanidy tena tao amin'ny fiangonana Saint Marko ny menavazana, ary miorina ao an-tanàna ambonin'i Zagreb.
Mampisara-kevitra ny firenena ny toe-draharahan'i St. Marko. Ny sasantsasany mihevitra ny [fanapoahana] tavoahangin'etona sy ny fanagadra-tena ho endrika fampihorohoroana raha mijery izany ho zon'ny menavazana noho ny tsy fahatontosan'ny fitakiana kosa ny hafa. Nanomboka nirohotra nankany amin'ireo fikambanan'ny menavazana isan-toerana ny ampitson'io ny menavazana avy amin'ny lafivalon'i Kroasia hanatevin-daharana ny fihetsiketseham-panoherana.
Ireo mpitarika ny fihetsiketsehana, Đuro Glogoški sy Josip Klemm, sy ny vitsivitsy amin'ireo mpiara-mitolona aminy akaiky dia nandany ny alina tao am-piangonana. Intelo nifandona tamin'ny polisy ny menavazana nandritra ny alin'ny Asabotsy raha nitsapatsapa hiditra tao amin'ny fanorenana ny polisy.
Nanao fanambarana i Glogoški ny alahady:
Halina, intelo niezaka hiditra tao am-piangonana ny polisy, saingy voatery niverina ry zareo satria tsy navelanay ry zareo. Manantena izahay fa hiantso anay hifampiresaka ireo filohan'ny vahoakan'ity firenena ity. Mampanahy ity toe-draharaha ity. Noho ny zavatra nitranga halina dia mampanahy indrindra ny ainay. Miezaka haka an-keriny an'i Josip Klemm ny olomanakajan'ny polisy saingy tsy nahomby.
Niezaka hifampiresaka amin'ny mpanao fihetsiketsehana ny minisitra misahana ny raharahan'ny menavazana, Predrag Matić, tamin'ny 30 Mey, andro Asabotsy, ary hihaino ny fitakian'izy ireo hanaovana fangataham-pihaonana amin'ny Praiminisitra Kroaty Zoran Milanović. Saingy noho ny fikatonan'ny biraom-panjakana amin'ny faran'ny herinandro, dia ny Alatsinainy no notanterahina ny fihaonana.
Rehefa tsy nisy zavatra tapaka nandritra ny fihaonana tamin'i Milanović, Matić ary manampahefana hafa ny Alatsinainy, dia nanambara i Đuro Glogoški fa hitoetra ao amin'ny tobiny ao afovoan-tanànan'i Zagreb ao amin'ny lalana Savska ireo menavazana izay miroso mankany amin'ny fialan'i Matic sy ny lefiny Bojan Glavašević ary hiandry ny fihaonana manaraka amin'ny manampahefanan'ny governemanta nomanina ho amin'ny Alatsinainy 8 Jona.
Nilaza tamin'ny media ny Praiminisitra Milanović taorian'ny fihaonana voalohany tamin'ny menavazana fa “bitika amin'i Kroasia” ny olana arangarangan'ny mpanao fihetsiketsehana “nefa mitabataba be loatra momba azy ireo.”